Bogga ugu weyn Goobaha Shukaansiga Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee ugu Fiican 15 | Qabashada Doonta
Ma rabtaa inaad ogaato qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee bilaashka ah ee shukaansiga goobood oo aad kula kulmi karto dad yaab leh? Ama si ka sii fiican, la kulan jacaylka buuxa ee noloshaada?
War wanaagsan! Waxaan kuu diyaariyey liis dheer oo iyaga ka mid ah.
Yaa ku yidhi waxaad u baahan tahay inaad bixiso lacag badan intaadan helin qof aad si dhab ah ugu xidhan karto? Goobaha shukaansigu waxay caddeeyeen inay yihiin hab lagu kalsoonaan karo oo lagu heli karo lamaane sannado badan. Madal keenaysa kali kali meel fog iyo mid dhow mid walbana ku xira danta ay leedahay runtii waa mid mudan.
Haddii ay tahay hookup ah ama xiriir muddada dheer aad raadinayso, online shukaansi sites waxay leeyihiin oo dhan ee dukaanka adiga iyo sidoo kale lacag la'aan ah!
Sidaa darteed, waxaan kuu keenay liis ah goobaha ugu wanaagsan ee shukaansiga tooska ah ee bilaashka ah ee la heli karo si loo waafajiyo baahiyaha xiriirkaaga.
Laakiin ka hor intaanan sii socon, halkan waa jaleec degdeg ah.
Waa Maxay Goobaha Shukaansiga Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee ugu Fiican?
Halkan waxaa ah liiska ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee shukaansiga goobaha la heli karo.
Shukaansi bilaash ah
Shukaansi gebi ahaanba bilaash ah
La kulan aniga oo faraxsan
Kaliya reer London.
OkCupid waa mid ka mid ah barnaamijyada shukaansiga qadiimiga ah ee ugu da’da weyn oo leh rikoor aan laga adkaan karin sameynta in ka badan 91 milyan oo xiriir sanad walba. Boggan shukaansiga ugu sarreeya wuxuu adeegsadaa algorithm-ka-gaarka ah iyo su'aalaha taxanaha ah ee shakhsiyadda si uu kugu waafajiyo qofka run ahaantii muhiimka ah-waxaad dhihi kartaa “ciyaar kaamil ah” iyadoon loo eegin meesha aad joogto.
Waxaan aragnaa natiijada tan in ka badan 50,000 oo taariikho ah oo dhaca toddobaad kasta dadka isticmaala OkCupid.
Koonto bilaash ah, waxaad ku arki kartaa dhammaan cayaaraha aad karti u leedahay, diri karto oo aad heli karto farriimo, oo lagu ogeysiinayo cidda ku jeclaatay. Tani waa inta ugu badan ee aad u baahan tahay si aad u isticmaasho app -ka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa xaddidan - tirada jecel ee aad u diri karto maalin taas oo yareynaysa tirada cayaaraha si aad ugu jawaabto. Haddii aad jeclaan lahayd inaad koontadaada kor u qaaddo, waxaad dooran kartaa A-Liiska Diiwaangelinta $ 9.95 (£ 7.60) kaas oo ku siinaya marin aan xadidnayn wax walba.
Si aad wax badan uga ogaato OkCupid oo u soo dejiso barnaamijka, guji xiriirinta hoose.
WAX BADAN KA EEG OKCUPID
#2. Bunka La Kulmay Bagel
Qof kastaa wuxuu la xiriiri karaa inuu u ordo si uu u qabsado koob qaxwe ah markaad u socoto shaqada. Laakiin sidee baad sidoo kale u qabsan kartaa saaxiibkaa/saaxiibkaa? Nacasnimo! Mid kale oo ka mid ah goobaha shukaansiga tooska ah ee bilaashka ah ee ugu wanaagsan waa CoffeeMeetsBagel. Goobtan shukaansiga ujeeddadeedu waa inay soo saarto xiriirro leh cadaadis yar oo leh astaamihiisa.
Markaad iska diiwaangeliso CMB, waxaad marin u yeelan doontaa inaad hesho toddobadii kulan ee ugu fiicnaa -oo loo yaqaanno “boorsooyin” duhur kasta iyadoo lagu saleynayo cidda dan kuu muujisay iyo cidda aad ku jawaabtay.
CMB waxay ku dhiirigelisaa isticmaaleyaasheeda inay wadahadalka sii nooleeyaan todoba maalmood ka hor inta aysan meesha ka saarin ciyaarta. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad go'aansato inaad runtii rabto inaad hesho lammaane ama aad caajistay. La yaab ma leh badi kulannada CoffeeMeetsBagel waxay noqdaan xiriirro waqti-dheer.
Hadday tahay koonto lacag la'aan ah ama koonto lacag lagu bixiyo, adeegsadayaasha CMB waxay helaan inta badan astaamihiisa. Si kastaba ha noqotee, furaha furashada dhammaan faa'iidooyinka ku jira barnaamijka ayaa ah inta jeer ee aad adeegsato barnaamijka.
Guji badhanka hoose si aad wax dheeraad ah uga ogaato goobtan shukaansiga ee bilaashka ah ee internetka iyo si aad u soo dejiso barnaamijka.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN COFFEEMEETSBAGEL
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 15 Barnaamijyada Shukaansiga Dhallinyarada ee ugu Fiican 2022 | Hayso Dareenkaaga Yar
#3. Kalluun badan
Sida mid ka mid ah goobaha shukaansiga ee ugu da'da weyn, Plenty of Fish wuxuu bixiyaa mid ka mid ah ururinta ugu wanagsan ee su'aalo-ururinta in ka badan 90 milyan isticmaale. Tani waxay ujeedadeedu tahay inay siiso dhul siman dad badan - la furay, waalid kelidood ah, ka weyn 40 jir, iyo qaar kaloo badan.
POF waxay ku qaadataa jawaabaha su'aalahaaga oo waxay kuu abuurtaa tartamo. Its version free bixisaa oo dhan waxyaabaha ugu waaweyn ee aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan app sida arki profiles dadka kale, diraya iyo helitaanka fariimaha kuwaas oo ku riday liiska mid ka mid ah free online ugu fiican shukaansi sites.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeclaan lahayd inaad kor u qaaddo koontadaada si aad u hesho astaamo qaali ah sida istaagidda raadinta, tirada sawirrada ee ku yaal astaantaada markaa waxaad dooran kartaa xubinnimadeeda lacagta leh oo qiimaheedu yahay $ 38.99 (£ 29.77) muddo saddex bilood ah.
Adeegso iskuxirka hoose si aad wax badan uga ogaato barnaamijkan shukaansi ee ugu sarreeya oo aad soo dejiso.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN BADANKA KALUUNKA
#4. Shukaansi Bilaash ah
Sida magacu tilmaamayo, Shukaansiga Bilaashka ahi waa mid ka mid ah goobaha shukaansiga bilaashka ah ee ugu caansan UK. Barnaamijkan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku cusbooneysiiso astaantaada sawir kasta oo aad dooratay oo kula jaan qaadaya dadka aad isku danta tihiin meesha aad joogto.
Si ka duwan kuwa kale, uma baahnid inaad lacag bixiso si aad u hesho dhammaan sifooyinkiisa. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangeliso oo isla markaaba waxaad heli kartaa dhammaan faa'iidooyinka ay leedahay. Hal saxiix ayaa kuu jira inaad la kulanto midka! Wanaaggu waa, waxay noo ballan qaadeen inay sidaas ahaan doonto.
Si aad wax badan uga ogaato goobtan shukaansiga ee onlaynka ah, guji xiriirka hoose.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN TAARIIKHDA BILAASHKA AH
Qof kasta oo raadinaya inuu tago qaar ka mid ah taariikh halis ah oo la kulmo qof u badan tahay inuu noqon karo lammaanahooda iyada oo aan saaxiibada caadiga ah ee xaaladda dheefaha aad u aadi lahayd Hinge.
Boggan shukaansiga ee ugu sarreeya wuxuu adeegsadaa macluumaad shaqsiyeed sida dhiirrigelin, qowmiyad, diin, waxbarasho, iyo in ka badan si uu kuu helo astaamo aad ku mashquulsan tahay meel kasta laga bilaabo shan illaa 15 ciyaarood maalintii. Soojeedintani waxay ka koobnaan kartaa “Wixii ugu darnaa ee aan sameeyay” ilaa “Laba run iyo been.”
Tani waa sababta oo ah, Hinge waxay aad u xamaasad badan tahay abuurista goob shukaansi oo khadka tooska ah halkaas oo dadka kaligood isku xiri kara, si ka baxsan barnaamijka. Sidaa darteed halku dhiggooda cusub ee 'Naqshadeynta in la tirtiro'. Waxay u egtahay bilow wanaagsan oo xiriir xoog leh sax?
Adeegso iskuxirka hoose si aad u ogaato waxa badan ee Hinge ay bixiso.
WAX BADAN KA FIIRI HINGE
Dadka akhriya nuxurkaan, waxay ku dambeeyaan akhriska 15 Barnaamijyada Shukaansiga Cougar ee ugu Fiican 2022 | Hel Shimbir Jacayl Qaangaadh ah
#6. Shukaansi Gebi ahaanba Bilaash ah
Shukaansiga gebi ahaanba bilaashka ah waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee shukaansiga ee UK. Boggan shukaansiga ee ugu sarreeya oo 100% bilaash ah wuxuu ku siinayaa fursad aad ku biirto, raadiso, aragto, iyo farriin la wadaagto dadka kale ee kaligood raadinaya taariikh adiga oo aan ku bixin dinaar.
Si ka duwan goobaha kale, Shukaansiga gebi ahaanba bilaashka ah uma baahna wax lacag ah si kor loogu qaado xubinnimadaada ama loo furo astaamaha kale. Dhammaan astaamaheeda waa la heli karaa markaad is -qorto si aad xubin uga noqoto.
Hadda waad ogtahay inay jirto 100% goobta shukaansiga bilaashka ah ee internetka, guji xiriirinta hoose si aad wax badan u barato oo aad isu qorto.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN SHAQAALAHA BILAASHKA AH
Mid kale oo ku jira liiska meelaha ugu fiican ee shukaansiga tooska ah ee internetka waa Fdating. Goobtan shukaansiga ee internetka gabi ahaanba waa u bilaash in la galo mana u baahna khidmad xubinnimo ama khidmad casriyayn ah. Xitaa waad mari kartaa astaamaha dadka kale adigoon soo galin. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa inaad gasho si aad farriin u dirto.
Waxaad u dejisan kartaa profile kaaga si kasta oo aad doorato oo u dejiso tirada dadka ee danahaaga. Waxaad xitaa arki kartaa markii taariikhaha suurtagalka ah ay ugu dambeyntii ka shaqeynayeen goobta, taas oo ku badbaadinaysa dhibaatada fariimaha xisaabaadka dhintay.
Eeg xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato Fdating.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN DADKA
Sababtoo ah inta badan apps shukaansi waa cadaalad LGBTQ loo dhan yahay, weli way fiican tahay in ay leeyihiin shukaansi bulshada ka go'an haweenka. Tani waa halka ay Iyadu ka soo galayso sawirka. Goobtan shukaansiga online-ka ah waxaa u abuuray naagaha caqiidada ah ee loogu talagalay dumarka caqiidada ah waa meesha aad tagi karto haddii aad raadineyso lesbians furan xiriir ama hookup ama ciyaaraha lesbian maxalliga ah oo aadan weligaa ogeyn inay jiraan.
Waxay rumaysan yihiin in shukaansigu uu noqdo mid madadaalo u ah qof walba oo markaa loo habeeyay app -ka si aad si fudud ugu samaysan karto astaantaada oo aad si kalsooni leh ugu tagto taariikhda koowaad. HER waxay korodhay ilaa 4.5 milyan oo isticmaale tan iyo markii dib loo beddelay 2015 oo la yaab leh dhammaantood waa haween.
Sidoo kale, waxaad ku lug yeelan kartaa dhacdooyinka LGBTQ ee maxalliga ah, akhri wararka LGBTQ, oo waxaad saaxiibo ku yeelan kartaa quudinteeda-warbaahinta-bulshada oo kale.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad waxbadan ka ogaato HER oo aad soo dejiso barnaamijka, booqo xiriirinta hoose.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 10 Barnaamijyada Shukaansiga Furry ee ugu Fiican 2022 | Ku raaxayso Jaceylkaaga
Mid kale oo ka mid ah liiska ugu fiican online shukaansi sites waa Mingle2. Tani online shukaansi site kuu ogolaanaya in aad caleenta profiles iyo diri fariimaha oo dhan lacag la'aan ah. Xitaa waxaad wax ka daalacan kartaa adigoo daneynaya ama waddan. Dhanka kale waa inaadan u baahnayn inaad raadiso lammaane, waxaad sidoo kale yeelan kartaa saaxiibo cusub.
Markay joogaan Mingle2, waxay rumaysan yihiin in haasaawahu ay noqoto mid madadaalo leh oo qof walba u fudud. Sidaa darteed, dhammaan astaamaha waa la kormeeraa oo waad xiri kartaa qof kasta oo aadan rabin inaad la hadasho.
Si aad ugu raaxaysato dhammaan astaamaha Mingle2, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa is -qoritaan oo isla markiiba waxaad heli doontaa ciyaaro.
Guji xiriirinta hoose si aad wax badan uga ogaato Mingle2 iyo sida ay u shaqeyso.
WAX BADAN KA EEG MINGLE2
eLoveDates waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee shukaansi goobaha kali kali caalami ah. Barnaamijkan, waxaad ku abuuri kartaa astaantaada sawirro badan iyo liisaska aad ugu jeceshahay, dirto oo hesho farriimaha, iyo qiimeynta astaamaha. Xitaa waad raadin kartaa oo aad baari kartaa astaamo kale oo aad si dhakhso leh u heli kartaa ciyaartaada adiga oo adeegsanaya adeeggooda isbarbar dhigga.
eLoveDates waxay ballanqaadeysaa in dhammaan astaamihiisu ay bilaash yihiin oo aan lahayn xubinnimo qarsoon ama khidmad casriyayn ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho taariikh ama qofka aad nolosha wadaagto, ama aad wax badan ka ogaato barnaamijka, ku biir eLoveDates hadda bilaash adiga oo gujinaya iskuxirka badhanka ee hoose.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN ELOVEDATES
Sidoo kale tan akhri 15 Barnaamijyada Shukaansiga Gayga ee ugu Fiican 2022 | Dib u Eegid Buuxda
#11. Kalluunka Kali
Maxaad u raadinaysaa kalluun badan oo badda ku jira markay dhammaantood internetka ku jiri karaan oo diyaar u yihiin inay kula qabsadaan! Barnaamijkan shukaansiga tooska ah ee tooska ah wuxuu siinayaa fursad dadka keligood ah inay la kulmaan oo ay is dhexgalaan. Waxay kuu oggolaanayaan inaad ku biirto oo aad fiiriso astaamaha bilaashka ah- dhammaan astaamaha ayaa la hubiyaa si loo hubiyo inay dhab yihiin.
Kalluunka Kaligood wuxuu ballan -qaadayaa inuu leeyahay badweyn ay ka buuxaan kalluun kala duwan. Iyadoo aan loo eegin midabka timaha, da'da, sifooyinka, iyo xiisaha, waxay ku heleen dabool!
Waa maxay sababta aad u sugto waqti dheer marka aad ka fog tahay inaad la kulanto saaxiibkaa.
Adeegso iskuxirka hoose si aad wax badan u baratid oo aad isu qorto.
FAAHFAAHIN KALE OO KU SAABSAN KALUUNKA
#12. Igu Aadiya Farxad
Match Me Happy waa goob kale oo shukaansiga tooska ah oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka aan Ingiriiska ahayn ee kuu oggolaanaya inaad is -qorto, sameysato astaan, oo aad u dirto farriimaha hordhaca dhammaantood bilaash - oo waxaad dooran kartaa qaybtaada goobta iyadoo ku saleysan gobolka.
Waa meel xiiso leh halkaas oo aad ka heli karto ciyaaro la yaab leh oo aad ku ogaan karto waxyaabaha cusub ee aad ka rabto xiriirka. Xitaa waad abuuri kartaa liis aad ugu jeceshahay oo aad u diri kartaa 'baraf' 'aan xad lahayn oo xubin xubin ah.
Hadday tahay taariikh deg-deg ah oo aad rabto ama xiriir fog oo leh xiriir adag, waxaad ku heli kartaa Match Me Happy. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad raadiso taariikhaha iyadoo loo eegayo xiisahaaga.
Si kastaba ha noqotee, si aad u sii wadato adeegsiga farriinta kuu oggolaanaysa inaad dirto baaqyo degdeg ah, waa inaad bixisaa.
Si aad wax badan uga ogaato goobtan shukaansiga ee bilaashka ah ee internetka, guji xiriirka hoose.
ARAG WAX BADAN OO KU SAABSAN IGA DHIG FARXAD
AKHRI WAX DHEERAAD AH: Barnaamijyada Kalluumeysiga Bilaashka ah ee ugu Fiican oo leh Talooyin Xoog leh 2022
Tani sidoo kale waa mid ka mid ah goobaha shukaansiga online ugu da'da weyn. Iyadoo in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah, eHarmony waxay isticmaashaa nidaamkeeda u dhigma ee u gaarka ah si ay uga caawiso kali inay helaan jacayl.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad abuurto profile ah oo dhan lacag la'aan ah oo la falgalaan kali kale ee app ah. Sannadkii 2013, waxay ku dareen xogta dadka isku jinsiga ah ee kuu ogolaanaya inaad hesho lammaanayaal isku jinsi ah oo ku xiisaynaya.
Si kastaba ha noqotee, si aad u furato astaamaha buuxa ee barnaamijkan, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmadda xubinnimada - laakiin waxay kugu dhiirrigelinayaan inaad 'isku daydo ka hor intaadan iibsan' bilaash marka hore. Iyada oo tijaabada bilaashka ah, waxaad ka jawaabi kartaa su'aalaha eharmony, arki kartaa ciyaarahaaga, oo aad diri kartaa farriimaha.
Lacagta Xubinnimadu waxay ka bilaabmaysaa £ 8.95 bishiiba, laakiin taasi waa haddii aad is -qorto laba sano, iyada oo is -qoritaan gaagaaban uu kor u kacayo qiimaha billaha ah.
Si aad wax badan uga ogaato eharmony iyo sida ay u shaqeyso, guji xiriirka hoose.
WAX BADAN KA EEG DHEERAADKA
Match waa goob kale oo shukaansiga tooska ah oo bilaash ah oo kaa caawinaysa inaad abuurto astaan, la falgasho keli -yaasha kale, oo aad u dirto jecel.
Waxaad u dejisan kartaa profile-kaaga in lagu ogeysiiyo kaliya marka keligood ee doorashadaada ay daneeyaan. Ama qaabka qarsoodiga kaas oo kuu ogolaanaya inaad si qarsoodi ah u aragto profile-yada kuwa kale iyada oo aan aqoontooda la garanayn oo hubinaysa inaad u muuqato kaliya dadka aad xiisaynayso.
Si kastaba ha noqotee, si aad u furto dhammaan astaamaha barnaamijka sida farriinta, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso. Lacagta xubinnimada waxay ka bilaabataa £ 9.99 bishiiba muddo lix bilood ah. Weli, ikhtiyaarka bilaashka ah ayaa weyn haddii aad rabto inaad baarto astaanta dadka kale.
Guji xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato Match.
ARAG WAX BADAN OO KU SAABSAN CIYAARTA
#15. Kaliya Singles London
Just London Singles waa goob shukaansi oo maxalli ah oo maxalliga ah oo kuu oggolaaneysa inaad ku xirnaato kelyaha aaggaaga. Waxaa loogu talagalay shukaansiga caasimadda halkaas oo ay adag tahay in la helo xiriirro.
Markaad ku biirto beeshan, waxaad marin u heli kartaa xubnaha shabakadda oo laga yaabo inay leeyihiin dano kale, astaamo, iyo xulashooyinka hab -nololeedka. Tani waxay si weyn u kordhineysaa fursadahaaga helitaanka waxa aad raadineyso.
Si kastaba ha noqotee, si aad ugu raaxaysato faa'iidooyinka kale ee abka sida dirista iyo helista farriimaha aan xadidnayn, iyo aragtida cidda aragtay astaantaada, bixi khidmadda xubinnimada.
EEG WAX BADAN OO KU SAABSAN KALIYA LONDON
AKHRI WAX DHEERAAD AH: 15 -ka Barnaamij ee ugu sarreeya ee Saaxiibbo lagu Sameeyo 2022 -ka
Jacaylku khasab ma aha inuu helo wax si loo helo. Internetku wuxuu fududeeyay inaad u baahan tahay inaad ka hesho qaar ka mid ah boggaga shukaansiga ee ugu wanaagsan iyo Voila !! Jacaylka buuxa ee noloshaada ayaa laga yaabaa inuu sugo inuu kula kulmo.
Si naxariis leh iila wadaag khibradaada, waxaan jeclaan lahaa inaan labbiskayga ku diyaariyo waqtigii loogu talagalay.
Waan ku xidideynayaa!
21 Hustles Side -bixinta Lacagta Badan ee Dadka Naafada ah
Ka fikirida dhaq-dhaqaaqyada dhinaca mushaharka sare leh ee dadka naafada ah waxay kaa dhigi kartaa inaad ogaato in qaar badan oo ka mid ah kuwa…